Ny fomba fampiasana ny Google Fandikanteny
2014-12-15 @ 23:21 in Ankapobeny
Nalaza vetivety teo amin'ny Malagasy Mpiserasera indray ny fijoroan'ny "Google Translate" na "Google Traduction" amin'ny teny malagasy tamin'ity volana desambra 2014 ity. Tsorina fa efa hatry ny ela ny tena no nitady fitaovana an-tserasera na milina an-tserasera na ivelan'ny serasera ahafahana mametraka dikanteny malagasy ireo teny vahiny fantatry ny tena. Efa nampiasaina ny tahalan'ny "tenymalagasy.org" sy ny "freelang" fa tsy mahafa-po loatra satria samy manan-tompo ireo [misy fizakàmanana manokana] fa tsy mametraka ny teny na dikanteny hita ao ho fananana iombonana iaraha-misalahy na andraisan'ny besinimaro anjara ("crowdsourcing"); mahafinaritra ny zava-bitan'izy ireo fa tsy mahafa-po ahy manokana satria ao amin'ny tahala notononina voalohany dia tsy fantatra hoe nekena ve sa tsia ny tolo-kevitrao nanolotra voambolana iray, ary ao amin'ny faharoa kosa mbola tsy nahita fandikana ny teny anglisy ho amin'ny teny malagasy aho. Nihevitra manokana aho fa tsy manaraka andro loatra ny votoaty ao amin'izy ireo.
Nitady milina an-tserasera na ivelan'ny serasera ahafahana mampiasa indray ny dika efa vita
Mitady fivoarana haingana dia haingana aho ary avy amin'ny tahala ahafahan'ny besinimaro mandray anjara mavitrika ihany no fomba ahafahana manajary izany fivoarana haingana izany, ahafahana mampiely haingana sy mampiasa ireo voambolana teknika sy teknolojika na an-tserasera hitan'ny mpiray tanindrazana na mpakamamy ilay tenindrazana iombonana, na ireo teny sarotra ho an'ny mpiray tanindrazana ny mitadidy azy. Tsy manampahaizana sady tsy manam-potoana hananganana rindrambaiko ahafahana mitahiry ireo voanteny vaovao na mahazatra, eny fa na mety ho tsy fampiseho masoandro noho ny fitaizana napetraky ny misionera vahiny ny tena ka ny tao amin'ny "google translate" ihany no tena nikirizako itadiavako lalana hoe ahoana no ahafahana mitahiry ireo teny nandikana ireo teny vahiny lasa gasiana fotsiny matetika.
Ny tena tao an-tsaiko voalohany raha nikaroka rindrambaiko na milina aho dia hoe ahoana ny fomba ampiasàna indray ireo lahatsoratra ao amin'ny Global Voices Online teny malagasy ho amin'ny fandikanteny avy amin'ny teny anglisy ho amin'ny teny malagasy farafaharatsiny. Mbola ny teny anglisy aloha no teny iraisampirenena voalohany sy maharaka [ny toetr'] andro ka rehefa voadika amin'io teny io ny tenintsika Malagasy dia mora kokoa ny handikana azy ho amin'ny tenim-pirenena maro dia maro na mba efa fantapantatra ratsy eo ny tian-kolazaina. Tsy mbola nahita aloha aho hatreto ary tsy mbola nisy nilaza fa dia hanomboka na hanohy miaraka amin'ity "google traduction" amin'ny teny malagasy ity aloha no akaiky indrindra hatreto.
Lalana izorana hanatsarana ny dikanteny ao amin'ny google
Sahirantsaina ihany ny tena rehefa mahita fa izay teny rehetra sarotsarotra dia voadika ho zavatra daholo na inona na inona. Hitako hatreto amin'ny fotoana nanoratana fa ny dika mandeha ho azy rehefa hamadika pejy iray ho amin'ny teny malagasy amin'ny "application" dia "zavatra" [mariho fa mamadika pejy iray ho teny malagasy no lazaiko hatreto fa tsy ilay fafana fampiasantsika izay ahitana ny "fampiharana" nefa mety hahaliana ihany koa ny "rindranasa". Ny voambolana "application" anefa tokony tsy ho azo gasiana fotsiny amin'izao noho ny fisian'ny litera "c" izay tsy tafiditra anaty abidia malagasy amin'ny fomba ofisialy, tahaka izany ihany koa ny mi-"tweet", mi-"facebook" sns. Noho izay toe-javatra izay dia tsorina fa tsy mifanaraka amin'ny toe-tsaina mamatam-bonona mihitsy ny tokony handraisana ity "google fandikanteny" ity fa mbola vao mandavaka sy mametraka ny fototra isika, izany hoe mbola lavitra dia lavitra ny lalana. Tsy maintsy misy fandraisana anjaran'ny daholobe manana fahalalana momba ny teny adika sy ny vokatra mivoaka izany rehetra izany. Mariho izany fa tsy maintsy mandray anjara amin'ny fanatsarana ianao raha tianao ny hahahaingana ny fivoaran'ity milina ity. Tsy manampahaizana aho fa izay efa hitako sy nataoko ihany no tantaraiko aminareo.
Voalohany: miditra na manangana kaonty google vaovao
Mety misy ihany ny fahafaha-manitsy ireo fehezanteny nadika sy ny fehezanteny nivoaka fa ny tsaratsara kokoa, araka ny fihevitro manokana izay mety ho diso, dia entina ijerena ny mahamatotra ny firotsahana an-tsitrapo ho amin'ny fandikana nataonao ny miditra amin'ny kaontinao ao amin'ny google. Mba mety ho hitany ihany koa ny fahavitrihanao na mba mety ho faly amin'izay vitanao ihany koa ianao amin'ny fametrahana an-tserasera ny fandikanteny ho amin'ny na avy amin'ny teny malagasy.
Faharoa : miditra amin'ny pejy "google translate" na "google traduction"
Tsy maintsy miditra amin'io pejy io ianao raha hijery ilay fandikanteny. Azonao atao ny manao fandikana kapo-batana eo amin'ny fafana fa misy lalana iray hafa azo atao ihany koa, sady toy ny lalao ilay izy no mila saina mieritreritra ihany koa. Aza asiana na inona na inona eo amin'ny fafana ankavanana sy ny fafana ankavia. Eo ambanimbany eo somary afovoany misy fanamarihana hoe "Google fandikanteny ho an'ny orinasa..." eo ambonin'io misy soratra voaravaka loko mavomavo manao hoe "Please help Google Translate improve quality for your language here". Miloko hafa ny voambolana "here" ka io no tsindrio fa ho tafiditra ao amin'ny "Community" ianao. Eo amin'izay misy lohateny hoe "My languages", tsindrio io raha tsy efa misokatra avy hatrany ilay izy. Nasaina nisafidy teny moa aho ka telo no notsindriako dia ny Anglisy, ny Frantsay ary indrindra indrindra ny Malagasy. Vita izay safidinao dia "tehirizo" (Save na Sauvegarder).
Sady lalao no fanitaran-tsaina ilay "Improve Google Translate"
Zavatra telo no azonao atao rehefa tafiditra ao ianao, na mandika teny (soratra) na mitsara na manamafy, na manao ny roa amin'ireo telo ireo na manao azy telo mitambatra mifandimby. Rehefa mahavita maromaro ianao dia azonao jerena ny antontanisan'ny vitanao amin'ny fanindriana ny rohin'ny "My Answers". Raha mandika ianao ka mahita teny mbola tsy fahitanao dia azonao atao ihany ny mijery amin'ny ankihy - kiheba (onglet -tab) iray hafa ny google translate dia mijery ny ambaran'ny rakibolana eo ambany eo na mijery ny dikany amin'ny teny frantsay na teny hafa manavanana anao (ankoatra ny teny malagasy kosa angamba an!)
Na dia mety ho tsotsotra aza ireo nambarako ireo dia efa lavalava ihany ary mety mampihazakazaka mankany amin'ny fanatsarana ny dikantenin'ny milina koa dia mazotoa daholo ary!
Jentilisa 16 desambra 2014